Chevrolet – AutoMyanmar
နေပြည်တော်မှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Chevrolet ရဲ့ Road Show တစ်ခု
Chevrolet Myanmar ဟာတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ကနေ ၂၃ ရက်နေ့အထိ Road Show တစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Road Show ကိုတော့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Sinma Living Mall မှာ နံနက် ၉ နာရီကနေ ည ၉ နာရီအထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ Road Show ရဲ့ Promotion ကာလမှာဆိုရင် Chevrolet ကားတွေကို USD 6000 discount နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Chevrolet Malibu ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅,၀၀၀၊ Trail Blizer ကို အမေ ရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅,၀၀၀၊ Suburban ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၉,၀၀၀၊ Trax ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၅,၀၀၀ နဲ့ Cruze ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ […]
Promotion အစီအစဉ်နဲ့ကျင်းပလျက်ရှိနေတဲ့ Chevrolet Myanmar Road Show
Chevrolet Myanmar ဟာတော့ သူ့ရဲ့ Road Show ကို City Mall St.John Shopping Center မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ကနေ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကျင်းပတဲ့ တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာ ပြသထားတဲ့ ကားတွေအပြင် တခြား Chevrolet ကားအမျိုးအစားတွေကိုပါ USD 2000 လျော့စျေးနဲ့ဝယ်ယူသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Chevrolet Myanmar မန်နေဂျာတစ်ဉီးရဲ့ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ Road Show မှာတော့ 2018 Chevrolet Malibu, 2018 Chevrolet Trax, Chevrolet Cruze အစရှိတဲ့ကားအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြပေးနေလျက်ရှိပြီး Malibu ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃,၀၀၀ ဝန်းကျင်၊ Trax ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃,၀၀၀ ဝန်းကျင် […]
Chevrolet, local, Motor Show and Event
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက USA ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Top 10 စာရင်းဝင်တဲ့ကားတွေကိုသိပြီးကြပြီလား?
သိပြီးကြတဲ့လူတွေ အမှတ်တရပြန်ဖြစ်အောင်နဲ့ မသိကြသေးတဲ့လူတွေလည်း သိသွားအောင် ဒီဆောင်းပါးမှာ ၂၀၁၇ ရဲ့ USA ရောင်းအားအကောင်းဆုံးကားတွေကို လိုရင်းတိုရှင်းဖြစ်အောင် ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မှာ USA ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့ – 1. Ford F-series ရောင်းချနိုင်မှုကားအစီးရေ – ၈,၉၆၇၆၄ သိန်း အရင်နှစ်ကထက်မြင့်တက်လာမှု (%) – ၉.၃ ရာခိုင်နှုန်း 2.Chevrolet Silverado ရောင်းချနိုင်မှုကားအစီးရေ – ၅,၈၅၈၆၄ သိန်း အရင်နှစ်ကထက်မြင့်တက်လာမှု (%) – ၁.၉ ရာခိုင်နှုန်း 3.RAM pick-up ရောင်းချနိုင်မှုကားအစီးရေ – ၅,၀၀၇၂၃ သိန်း အရင်နှစ်ကထက်မြင့်တက်လာမှု (%) – ၂.၇ ရာခိုင်နှုန်း 4.Toyota […]
Chevrolet, Ford, Honda, Nissan, Ram, Toyota